अमेरीका आर्सेव - रेहबर
एक्सएनयूएमएक्सले घोषणा गर्‍यो कि यो सेप्टेम्बरदेखि न्यु योर्क पेन स्टेशन र वाशिंगटन डि.सी. युनियन स्टेशनबाट नॉन-स्टप उच्च गति रेल सेवा सुरु गर्ने छ। लाइन केवल एक हप्ता भित्र सक्रिय हुनेछ। AMTRAK ले यसको नयाँ मार्ग घोषणा गर्‍यो! न्यूयोर्कबाट छुट्ने ट्रेन [अधिक ...]
बटेर, 17, संसारको सबैभन्दा प्रतिष्ठित मोटर्सपोर्ट घटना मध्ये एकको रूपमा देखाइएको छ। Peninsula होटल द्वारा पटक। जेम्स मस्डेन, मार्क वेबर, हन्ना Bronfman र सबै भन्दा विशेष र दुर्लभ संग्रह। [अधिक ...]
अमेरिकी गुगल, एप्पल, माइक्रोसफ्ट र अन्य प्रविधि कम्पनीहरु नेभिगेसन नक्शा, यातायात सुरक्षा नियन्त्रण संस्थानहरु अमेरिका मा प्रत्येक वर्ष सयौं मानिस रेलमार्ग पार गर्ने दुर्घटनाको कारण। संस्थाहरूको चेतावनीको बाबजुद, यी कम्पनीहरूको नेभिगेसन नक्शा [अधिक ...]
एबीबी रोबोटिक्स भविष्य को अस्पताल को समाधानहरु लाई विकसित गर्दछ
एबीबीले ह्यूस्टनमा टेक्सास मेडिकल सेन्टर (टीएमसी: टेक्सास मेडिकल सेन्टर) मा नवाचार परिसरमा एक नयाँ स्वास्थ्य केन्द्र खोलेको छ। अक्टोबर यो सुविधा, जुन 2019 मा खोलिनेछ, पहिलो स्वास्थ्य सेवा विशेष गरी एबीबी द्वारा स्थापित छ। [अधिक ...]
इलेक्ट्रिक फोर्ड एफ-एक्सएनएक्स पिकअप 150 टन ट्रेन वेगन
बिजुली देखाउन विमान को लागी बिजुली वाहनों को उत्पादन लाइन लगभग फैशन थियो। हामीले मिनी कूपरको विद्युतीय संस्करणमा यसको अन्तिम उदाहरण देख्यौं। एक समान विज्ञापन परियोजना फोर्ड बाट आयो। इलेक्ट्रिक एफ-एक्सएनएक्स पिकअप प्रोटोटाइप 150 टन [अधिक ...]
नयाँ फोर्ड रेंजर र रेंजर Raptor चुनौती मानकहरू
नयाँ फोर्ड रेंजर र Raptor, जुन यसको वर्गमा अनूठे र अपरिचित सुविधाहरू संग पट्टी उठाउँदछ, यसको नयाँ इन्जिनको साथ उच्च प्रदर्शन र उच्च ईन्धनको दक्षता प्रदान गर्दछ। नयाँ एक्सएनएमएक्सएक्स इकोब्ल्यु ईञ्जिनले 2.0 प्रतिशत सम्म ईंधन दक्षता प्रदान गर्दछ [अधिक ...]
फोर्डले विश्व इमोजी दिवसलाई नयाँ नयाँ पिक अप इमोजिसको साथ मनाउँछ
फोर्डले घोषणा गरेको छ कि यसले विश्वव्यापी कोड कंसोर्सियम (युनिकोड कंसोर्टियम) द्वारा स्वीकृत इमोजिस सूचीमा नयाँ पिक अप इमोजी थप्नको लागि लागू गरेको छ। फोर्डको नयाँ "पिक अप" ईमोजिसहरू युनिवर्सल कोड कंसोन्सियममा छोटो सूचीबद्ध छन्, जसले ईमोजिसको मूल्यांकन र अनुमोदन गर्दछ। 100 [अधिक ...]
सीगर कोलम्बिया र पेरू मा मोटर वाहन निर्यातकहरु लाई भेटिन्छ
सिङ डिजाइन, उत्पादन र चीनी मा टर्की नेता मा बिक्री, Uludag मोटर वाहन उद्योग निर्यातकहरु 'संघ 30 जुन मा आयोजित, कोलम्बिया र पेरु - 8 मोटर वाहन क्षेत्र व्यापार मिशन जुलाई को मिति बीच आयोजित कार्यक्रम साथ दिए। सीगर, गतिविधि [अधिक ...]
अमेरिकी लक्जरी जीप्स रेल रिलिज
नेभिडाको संयुक्त राज्यमा, 10 जुलाईमा 9.00 वरिपरि लक्जरी जीपहरू लैजानु, युनिफिक प्यासिफिक भाडा रेलगाडि पुग्यो। ज्यापको ठूलो संख्या बेवास्ता भएको छ। दुर्घटनामा ज्याप्स र पिक अप ले भाडा लिने रेलगाडि, [अधिक ...]
रिफाइनरीले आधुनिक DCS मा उत्पादन बढाउँछ
रिफाइनरीले आधुनिक DCS मा उत्पादन बढाउँछ। संसारको चौथो सबै भन्दा ठूलो जिंक निर्माता महँगो अनप्लान्ड्ड डाउनटाइमको अनुभव गरिरहेका थिए, जसले प्रति घण्टा 1,000,000 100 प्रति घण्टा र अपरेटिङल र वित्तीय जोखिम बढ्यो। जस्ता अयस्कको सुरुवात निकासी, अन्य [अधिक ...]
एयर HYPERLOOP भन्दा छिटो ट्रेन
17 / 06 / 2019 लेभेन ओजेन 1
विमान भन्दा बढी छिटो रेल: यो 20 मिनेटमा अंकारा देखि अंकाराबाट यात्रा गर्न सम्भव छ? या एक्सनमार्क देखि जर्मनी सम्म 1,5 प्रति घंटा? टेस्ला मोटर्स र SpaceX संस्थापक, जियियस व्यवसायी एलोन मुस्किल वास्तव मा एक पागल व्यक्ति हो। [अधिक ...]
क्युबाले रूससँग रेलवेको पुन: नविकरणको लागि अनुगमन गर्यो
रूसी उपप्रधान यूरी बोरिसोवले घोषणा गरे कि उनीहरूले क्युबा सरकारको साथ रेलवेको नवीकरणको लागि एक सम्झौता गरे। हवाना र मस्कोले क्युबामा रेलवेको नवीकरणमा एक सम्झौता हस्ताक्षर गरे। रूसको उप प्रधानमन्त्री युरी बोरिसोभ, सेन्ट पीटर्सबर्गमा अन्तरराष्ट्रीय आर्थिक फोरममा [अधिक ...]
विलम्बित वास्तविकताले ब्रिज डिजाइन परिवर्तन गर्नेछ?
आधुनिक पुलहरूको निर्माण अविश्वसनीय र अनौठो लाग्न सक्छ। यस स्तरको इन्जिनियरिङको बारेमा एक रोचक चीज मध्ये एक यसको निरन्तर परिवर्तन र विकास र अहिलेसम्म 21 हो। शताब्दी के अझ रोमाञ्चक छ [अधिक ...]
Bombardier स्थापित भएको थियो? यसले कसरी सुधार गर्यो?
Bombardier इंक व्यापारिक र निजी विमान निर्माताहरू, विश्वको सबैभन्दा ठूलो रेलहरूमध्ये एक हो। मन्ट्रियलमा आधारित कम्पनीको संस्थापक जोसेफ अरमान बाम्मीरियर, मेकानिकल इन्जिनियरिङ हो जसले पहिले पहिलो बर्फ इन्जिनको आविष्कार गर्यो। 1934 मा Bombardier को2वर्षीय छोरा [अधिक ...]
Pantone फ्री मेट्रो कार्यक्रम को 18
न्यूयोर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, बर्लिन, लन्डन र एम्स्टर्डम, को frigid हावा 'आफ्नो प्यान्ट सबवे यात्राको' बावजुद नेदरल्यान्ड बेलायतमा शहर यस वर्ष (कुनै प्यान्ट सबवे राइड) xnumx'inci घटना भएको थियो। यस वर्ष, संसारभरि दर्जनौं शहरहरू [अधिक ...]
वाणिज्य र उद्योग सदस्यहरूको बुर्सा च्याम्बर सबै manned अन्तरिक्ष उडान एयरोस्पेस मुद्दाहरू मा एक विशेषज्ञ छ अमेरिकी यात्रा मा नासा गरेको केनेडी स्पेस आधार को स्कोप भित्र यसलाई प्रयोग गर्न, त्यो Embry Riddle वैमानिकी विश्वविद्यालय भ्रमण गर्नुभएको थियो। BTSO को अन्तरिक्ष विमानन र [अधिक ...]
100 टर्किश उत्पादन एफ-विजन
27 / 09 / 2018 लेभेन ओजेन 0
4 टर्मिनल इन्जिनियर्स द्वारा4मा एक महिना को डिजाइन मा विकसित र Sancaktepe मा फोर्ड ओटोसान को विशाल R & D केन्द्र मा। 'एफ-विजन' ले स्तर स्वतन्त्र ड्राइभिङ्गको साथ पहिलो विद्युत् ट्रकले सम्पूर्ण संसारमा ठूलो असर पारेको छ। फोर्ड ओटोसानको 100 बिजुली र [अधिक ...]